क्रिस्टचर्च मा दुई मस्जिदहरुमा आक्रमण मा 49 मारे गए मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	15 मार्च 2019 मा	• 20 टिप्पणिहरु
मिडियाको अनुसार, 49 एकमा मृत्यु भयो दुई मस्जिदहरूमा आक्रमण क्रिस्टचर्च, न्यूजील्याण्डमा। निस्सन्देही यो नम्बर समायोजन गरिनेछ। त्यो मान्छे को डर र डर बनाउन को लागी यस्तो एक मनोवैज्ञानिक संचालन को आसपास अराजकता को सबै भाग हो। यस समयमा यो हमला संग मुस्लिम को बारी हो। जनसंख्या समूहहरू बीचको तनाव बढ्दै गएको छ। यदि यो काम गर्दैन भने यदि यो मिडिया प्रव्यापन द्वारा गरम हुन्छ, जुन संसारभरि बायाँ र दायाँ बीच तनाव तान्ने प्रयास गर्दछ, त्यसपछि त्यस्तो आक्रमणले मद्दत गर्नेछ।
"तर मार्टिन व्रिजल्याण्ड, तपाईं दावी गर्न सक्नुहुन्न कि यो आक्रमण नकली छ?"म कुनै पनि निश्चित कुराको साथ भन्न हिम्मत नगर्ने। मैले मात्र भन्न सक्ने एउटा मात्र चीज हो कि त्यस्तो आक्रमणले एकअर्का विरुद्ध जनसंख्या समूहलाई तेज पार्छ। बाँया र दाँया राजनीतिक दलहरू र समूहहरू एक पटक फेरि यो शोषण गर्न सक्षम हुनेछन्। परिभाषाको अनुसार, यस्तो आक्रमणहरूको लागी अधिक प्रहरी-राज्यको उपाय चाहिन्छ, र यो विश्वभरि विश्वभरको रिपोर्ट गरिएको छ, हरेक नागरिक फेरि खुसी हुनेछन् कि "आतंकवाद विरोधी उपायहरू" लिइएको छ। हामी एकपटक फेरि सन्तुष्ट हुन सक्छौं कि हाम्रा पीसीहरूले आईफोन र स्मार्टफोन्सहरू ठूलो डेटा प्रयोग गरेर ट्याप गर्दैछन् र हामी सबैका क्यामेराहरू र सुरक्षा गेट्ससँग खुसी हुन सक्दछ जुन सबै ठाउँमा राखिएको छ। हामी हाम्रो प्रहरी राज्य फेरि खुसी र सन्तुष्ट पार्नेछौं!
अघि बढ्नु अघि हामी न्यायाधीशमा जान्छौं। मीडिया हाइपेसका साथ मानिसहरू खेल्न र टेक्नोलोजी रूपमा सम्भव छ कि एक नजर राख्नुहोस्: हामी, कहिलेकाहीं टेक्निकल साधनहरू उपलब्ध छन् कि त्यहाँ हामीसँग मिडियामा एक मात्र तस्वीर छ? मिडियाको आत्मविश्वासलाई हेर्ने?
हामी TV मा कुन कुरालाई देख्न सक्दछ परिभाषाको परिभाषामा पर्दैन। विश्वास छ कि तपाईले कुन समाचार ल्याउनुभएको छ 'सत्य', वास्तवमा विश्वासको आधारमा 'विश्वास' भन्दा बढी केही होइन। तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि मिडियाले तपाईंलाई सत्य देखाउनेछ र गैर-निर्मित समाचारहरू देखाउनेछ। यद्यपि, यदि हामी अमीर अरबियहरुलाई हेर्न मिडिया कम्पनीहरूको हातमा हेरौं, हामी केही हानिकारक हुन सक्छौं। तर हामी चर्च मा पादरी लाई विश्वास गर्छौं। पुजारी जस्तै बच्चाहरु दुर्व्यवहार गरेको छ। हामी मण्डलीमाथि भरोसा राख्छौं। के यो मिडियामा पनि लागू हुन्छ?
हामी चाहँदैनौं र विश्वास गर्न सक्दैनौं कि उनीहरूले हामीलाई महत्त्वपूर्ण दिशामा मानिसहरु बीच भावना भोग्न प्रमुख मनोवैज्ञानिक अपरेशनहरू खेल्न सक्थे। प्रकृतिमा, ध्रुवीकरण सधैं एक वांछित दिशा मा वर्तमान मा जान्छ; जस्तै एक ब्याट्रि सँग प्लस र एक कोइन पोल छ, जसको साथ तपाईले एक हालै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। Elitist शीर्ष परत (जसको जेब मा मिडिया छ) यसले पोलिटेन्ट उत्पन्न गर्न यसको सम्पूर्ण निपटान छ। तिनीहरू "Antifa विरुद्ध Pegida" चाहते हो, दायाँ बायाँ, मुस्लिम विरुद्ध ईसाई विरुद्ध, र यति। यस तरिकाले अराजकताको आधार र त्यस अराजकताको आधार बनाउँदछ जुन तिनीहरू सधैँ नयाँ अर्डर सिर्जना गर्दछ, जसलाई शक्तिको थप केन्द्रिकरण सधैं परिणाम हुन्छ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
"हो, तर म अझै वास्तविक वास्तविक साक्षात्कारहरू देख्न चाहन्छु जुन साँच्चै दुखी छ र मैले परिवार र साथीहरूबाट सुनेको छु कि उनीहरूलाई यस्तो आक्रमणमा मर्ने व्यक्तिलाई थाहा छ"। हामी यसलाई सबै नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। त्यसैले यो सत्य हुन सक्छ, तर यो केवल जाली हुन सक्छ। मानौं कि यो एक मनोवैज्ञानिक कार्य हो जुन मानिसहरूको बीच तनाव (ध्रुवीकरण) को पैचपन गर्न को लागी, त्यसो त तपाईं कि फिल्म एनिमेसन (एआई, कृत्रिम रूप देखि बुद्धिमान सफ्टवेयर समाधान) को माध्यम ले गर्न सक्छन् वा केवल एक हत्यमान को माध्यम ले जो रक्तस्थल को कारण बन सकते हो। यो साँच्चै अझै सम्भव छ कि यस्तो आक्रमण वास्तविक र प्रामाणिक हो। म केवल बिन्दु बाहिर जान्छु कि तपाई अब अन्धासाथ भरोसा गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईं मीडिया प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, हामी यो भन्न सक्छौं कि मिडियासँग साँच्चै सफा नगर्ने रेकर्ड छैन।
माथिको भिडियोले कसरी देखाउँछ कि तपाइँ सबै प्रकारको छविहरू नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ दशैंका लागि हरी स्क्रिन मार्फत। यद्यपि, आजको सफ्टवेयरको साथ तपाईं धेरै चोटि जान सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं कुनै पनि अवस्थितबाट पूर्ण रूपमा अस्तित्वहरू नभएको बनाउन सक्नुहुन्छ (तल पहिलो भिडियो हेर्नुहोस्)। त्यसोभए तपाईंले प्रत्यक्ष आत्मनिर्धारित अनुहारहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिन सक्नुहुन्छ, जसमा यो देखिन्छ कि त्यो व्यक्ति वास्तवमा अवस्थित छ। तपाईं अनुहार पुन: निष्क्रिय सफ्टवेयर (माध्यमिक भिडियो हेर्नुहोस्) को माध्यम ले उत्तीर्ण गर्दछ। के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं कसरी अवस्थित छैन बाट सडकमा साक्षात्कार सञ्चालन गर्न यहाँ देखाइएको3सफ्टवेयर समाधान कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंले एक अवस्थित व्यक्ति (गहिरो नकली) सिर्जना गर्नुहुन्छ, अपराध दृश्यमा कसैलाई राख्नको लागि हरियो स्क्रिन प्रयोग गर्नुहोस् र अनुहारमा अभिनेतामा नयाँ अनुहार राख्न अनुहार पुन: निष्क्रिय सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो अनुहार र आवाज समायोजन गर्न स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै समयमा तपाईं सडकमा नकली आक्रमणको नजिकै एक अवस्थित साक्षीको साथ गहिरो नकली साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा: तपाईं वास्तवमा सबै कुरामा पूर्ण दृश्यमा राख्न सक्नुहुनेछ। "हो, तर त्यहाँ साक्षीहरू छन्, ठीक छ? त्यहाँ मानिसहरू छन् जो तिनीहरूले मान्छेलाई चिने हुन्? निस्सन्देह सबै पुलिस र एम्बुलेंस कर्मचारीहरू छन्?"यसको लागि तपाईंसँग गहिरो नकली सामाजिक मिडिया प्रोफाईलहरू छन् र बाँकी एक 'उच्च लक्ष्य' को लागि थोरै अतिरिक्त कमाई गर्न तयार छन्।
हो, यस्तो आक्रमण हुन सक्छ वास्तवमै वास्तवमा भयो, तर खेतमा मेरो विश्वास माफ गर्नुहोस्, पाडो पुजारी र मिडिया धेरै ठूलो छैन र यसैले मैले तपाईंलाई सम्भावित मनोवैज्ञानिक अप्ठेरो यस्तो मीडिया विस्फोटको पछि लागेँ। तपाईलाई थाहा छ तपाईंले के विश्वास गर्नुहुन्छ।
(यहाँ शूटिंग चित्रहरूको साथ अनुवर्ती लेख पढ्नुहोस्)
फ्रान्सेली क्रान्तिलाई जश्नको लागि राष्ट्रिय छुट्टीमा "नाइ क्वेटेटेक जुलिलेट" मा राम्रो आक्रमण
सीआईएको चार्ली हिब्रूले नयाँ कार्टूनको साथ "मुस्लिम आतंक" मा वृद्धि भोग्नु पर्छ
बिल कूपर र राजकुमारको आतंकवादी भविष्यवाणी कसरी आयो
ट्याग: आक्रमण, क्रिस्टचर्च, मस्जिदहरू, मस्जिदहरू, मस्जिदहरू, न्यूजील्याण्ड, आतंकवाद, आतंककारी आक्रमण, आतंकवाद, दुई
15 मार्च 2019 मा 13: 57
मैले यो भिडीयो देखेको हुँ ... थाहा छैन स्रोत स्रोत हो, तर केवल रेकर्डको लागि
16 मार्च 2019 मा 02: 48
15 मार्च 2019 मा 14: 04
"रगतले मलाई माझिरहेको थियो ..." मानिसलाई सफा ब्लाउज र सफा चेहराको रूपमा भने
16 मार्च 2019 मा 03: 07
समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान कुनै?
15 मार्च 2019 मा 15: 14
यदि म गलत छैन भने, क्रिस्टचर्च केही वर्ष पहिले समाचारमा पनि थियो। मलाई किन थाहा छैन। कुनै जडान छ? सायद तपाईलाई यो जाँच गर्ने अवसर छ।
15 मार्च 2019 मा 15: 38
त्यहाँ एक भूकम्प थियो र भवनहरू ध्वस्त भए ...
15 मार्च 2019 मा 15: 41
र अर्को भूकम्प:
15 मार्च 2019 मा 15: 51
यो राम्रोसँग विचलित हुन्छ कि एकैचोटि के हुन्छ र नियन्त्रणमा मिडियाले कुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ ...
तिनीहरूले अल्बर्ट पिक प्लानहरू लागू गर्न व्यस्त छन्।
15 मार्च 2019 मा 17: 04
Idd + तपाईंको मार्च सन्दर्भको सन्दर्भ छ अर्को रोचक मिति 22-3 हो
15 मार्च 2019 मा 17: 53
15 मार्च 2019 मा 16: 52
मैले बुझें कि धेरै अपराधीहरुलाई संदिग्ध को रूप मा गिरफ्तार गरिएको छ। आश्चर्य छ कि यदि एक सार्वजनिक आपराधिक परीक्षण हुनेछ कि पृष्ठभूमि र उद्देश्य देखाउने छ। यो असम्भव छैन कि एक वा बढी संदिग्धहरू सुरक्षा सेवाहरू द्वारा चलाइएका थिए वा आफूलाई घुसपैठ थिए। तपाईं अक्सर त्यो व्यक्तिलाई चाँडै रिलीज गरिएको छ र देख्नुहुन्छ कि तपाइँ अब त्यस व्यक्तिबाट सुन्न सक्नुहुन्न।
हामी पत्ता लगाउन सक्नेछौं कि हामी कहिलेकाहीँ थाहा पाउनेछौ भने तपाईसँग राम्रो 'वकीलहरू' र न्यूजील्याण्डका न्यायाधीशहरू जामिल्यान्ड, नीदरल्याण्डमा।
15 मार्च 2019 मा 19: 03
SIS को क्रमद्वारा गलत झण्डा अपरेशन?
"कुनै समूहले मेरो आक्रमणको आदेश दिएन, मैले निर्णय गर्यो। यद्यपि मैले पुनरुत्थान शूरवीर टम्प्लरलाई आक्रमणको समर्थनमा आशिष्को लागि सम्पर्क गरें, जुन दिइएको थियो। "
15 मार्च 2019 मा 21: 06
मैले बोइङ 737 मैक्स को बारे मा केहि नहीं सुनता, कसरि यो हुन सक्छ? यो देखिन्छ कि कसैले बोइङ र यसको शेयरधारकहरूको सुरक्षा गर्न चाहन्छ।
15 मार्च 2019 मा 21: 54
आजकल सम्पूर्ण जनहरूलाई गर्मी गर्न यो सजिलो छ। तिनीहरूले त्यसै गर्न प्रयोग गर्थे, अब यो छिटो छ।
Urk मा तपाईं त्यही कथा देख्नुहुन्छ, क्रिश्चियन जवानहरू जो तीव्र रूपमा राखिएको सबै नतीजाहरू संग प्रवेश गर्न सकिन्छ। NZ मा आक्रमण पनि अधिक भावनाहरु उत्प्रेरित गर्दछ। मानिसहरू जसले हामी खेलेका छौं भनेर उनीहरूलाई सतावटको रूपमा मिडियामा एउटै बक्समा राखे।
यदि तपाईं अष्ट्रेलियामा मस्जिदहरू मुस्लिमहरू गोली मार्न कोही छैनन् भने कुनै पनि आश्चर्य, कुनै ख्रीष्टियन-चर्च राम्रो लाग्दैन। किनभने यो मुसलमानों मा क्रिस्टचर्च द्वारा एक हमला हो। बसोबास गर्ने मित्रता युक्रेनले मोरक्कैन्सलाई आक्रमण गर्छ। तपाईले आफ्नो ट्रंकमा धेरै हतियारहरू कसरी देशमा लिनुहुन्छ जहाँ सबै हतियारहरू पंजीकृत छन्?
स्तम्भकारको नाम ### एल्फ ### el- पनि (अत्यन्त कम आवृत्ति) trumpet = trump = trumpet सबैसँग सम्बद्ध हुनेछ।
यदि म सबै प्रतिक्रियाहरू पढ्छु भने अधिकांशले परिकारहरूको नेतृत्व गर्दैछन् ###
16 मार्च 2019 मा 06: 51
जहाँ 28 जन्मदिनको केटाकेटीले युरोपलाई पहिलो उडान पुर्याउँछ र उनीहरूको विचार र घृणा दिनको लागि विभिन्न देशहरूमा भेटिन्छ। त्यसपछि यस सज्जनले डन्डेडिनमा केही महिनाको लागि जीवन बिताउन सक्दछन्, एक शूटिङ क्लबको सदस्य बन्ने र त्यसपछि आफ्नो काम गर्ने किराया कारहरू? त्यस्तो व्यक्ति कसरी क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्दछ?
जो चीज मलाई अजीब बनाइन्छ त्यो कुरा दुई गोली मारेर बीचको समय हो। मैले 11 मिनेट र7मिनेट पनि सुनेको छु। दूरी6किमी को बारे मा छ, तर तपाईं कार मा पहिलो मस्जिदबाट पढ्नुहुन्छ र त्यसपछि दूरी, कार पार्किंग र अर्को मस्जिद यो समयको अवधि पर्याप्त छ। किनभने म यहाँ यहाँ बस्छु, म आज मार्ग लिन चाहन्छु। दुर्भाग्यवश, पहिलो शूटिंग को मस्जिद वरपर धेरै सडकहरु अचानक बंद भयो। यद्यपि, हप्ताको दौडान म फेरि प्रयास गर्न चाहन्छु कि यो6किलोमिटर7मिनेट भित्र (शुक्रवार दोपहरमा) भित्रमा राख्न सकिन्छ।
16 मार्च 2019 मा 07: 30
रोचक! हामीलाई जानकारी राख्नुहोस् ..
16 मार्च 2019 मा 08: 36
के यो अजीब छ कि त्यो भिडियोमा कि क्यामेरासँग उनको टाउकोमा, उसले सबैलाई गोली हान्छ र यकिन छ कि तिनीहरू साँच्चै मरेका छन् भनेर फेरि गोली मार्न जान्छ। अर्को मस्जिदमा धेरै घायल मान्छेहरू छन्, जसमध्ये धेरैजना चलचित्रहरू र उनीहरूको फोनमा बसिरहेका छन्। यो मलाई लाग््छ कि तपाईं त्यस्तो स्थिति मा आफ्नो फोन पकडने छैन। तपाईं आफ्ना दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
16 मार्च 2019 मा 14: 19
घटनाहरू रिपोर्ट गर्न पहिलो हुन मिडियाको भीड़सँग व्यवहार गर्न सकिन्छ। तर यदि सत्य हो, यो मान्छेको जीवनको बारेमा हो (जसको परिवार, आदि छ)।
चीजहरू मर्नु भएको कुरा:
- समाचारका स्रोतहरू (अन्य मिडिया, पीएम, आदि) तपाईंले पुलिसलाई कस्तो जानकारी प्रदान गर्ने आशा गर्नुहुनेछ कि पीडितहरू र अन्यहरू।
- पीडितहरूको संख्याले परिस्थितिमा परिवर्तन गर्यो। घाइते भएका घाइतेहरू भन्दा बढी मरे।
जूता संग फोटो
- "अधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमा आफ्नो पहिचान पुष्टि गरेनन, किनभने त्यो शनिबारको लागि अदालतमा देखा पर्दछ र आधिकारिक रूपमा अझै पनि एक संदिग्ध छ।"
- '28-वर्षीय ब्रेंटन टारन्ट को गिरफ्तार गरी हत्या भएको आरोप लगाईएको छ (0700 घण्टा शनिबार NZ समय)
- "विस्फोटकहरू पनि फेला परेका थिए कि एक वा बढी वाहनोंसँग संलग्न थिए।" (?)
- "प्रधान मंत्री जकिंडा अर्र्डनले पहिल्यै एक प्रेस कन्फिगरेसनमा पुष्टि गरे कि शूटर चरमवादी उद्देश्य थियो" (केहि हद सम्म समयमै)
- यो एक ठूलो रगतको हुनुपर्दछ ... स्पष्ट रूपमा देखिने छैन
- "न्यूजील्याण्ड को प्रधान मंत्री, जयंडा एडर, डरावनी मा प्रतिक्रिया दिए। उनले "सबै भन्दा काला दिन" को बारे मा कुरा गरे र कुनै संदेह छैन: यो एक आतंकवादी हमला थियो। " (प्रधानमन्त्रीको लागि समयको लागि)
- "एक सिरिया संगठन अनुसार, कम से कम 1 सिरियाको मृत्यु भयो।" (अलग स्रोत)
- "पीडितहरूको बीचमा धेरै बच्चा पनि हुनेछ। पहिलो रिपोर्टअनुसार, यो मुख्य रूपले सिरियाका बालबालिकालाई चिन्ता गर्दछ। '(एन्कोलेशन, के हो?)
- 'उनको छोराछोरी अफगानिस्तानमा आफ्नो बुबा कोर्न को लागी धन को उभरने वाला अभियान शुरू गर्यो। '(चाँडै)
- "बांग्लादेश र बीडीएनएसएसएक्सएनएमएमएक्सएसीको एक समाचार साइटको अनुसार, उनी पनि आतंकवादी आक्रमणको क्रममा मारिएको थियो। "(अलग स्रोत)
- "सउदी न्यूज संस्था अल अरबियाको अनुसार, मोहसन अल मुजनीले आफ्नो चोटको सामना गरे। "(अलग स्रोत)
- "खालको अर्को छोरा अझै पनि हराएको छ।" (मस्जिदमा, वा अझै सम्म पहिचान गरिएको व्यक्तिहरूको संख्या?)
16 मार्च 2019 मा 14: 31
... र निस्सन्देही सबै मानिसहरु संग चिंतित हुनु हुँदैन जो रोकथाम रोगहरु र भूख देखि मृत्यु हुन्छ। थप समाचारहरू ...
16 मार्च 2019 मा 16: 06
मैले म बुझें कि अपराधी शूरवीर टमप्लायर (फ्रेमेसोसोरी) को सदस्य हो र दावा गरेको छ कि उनको संगठन को केहि सदस्यहरु जसको हो उनको पुराना सर्बियाई (पूर्वयुद्धीय) दिग्गजों हो। व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि कोसोवोका लागि संघर्ष (भर्खरैको राजनीतिक तनावका कारणहरू) आगामी महिनाहरूमा बढ्न सक्छ।
« तत्काल कल!
शूटरको भिडियो फुटेज ब्रेंटन टारान्ट (लाइभ स्ट्रिम) क्रिस्टचर्च न्यूजील्याण्ड »
कुल भ्रमण: 11.612.656